Inona no jerena ao Nerja, tanàna fizahan-tany any atsimo | Vaovao momba ny dia
Na dia marina aza fa izay ho hitanao ao amin'ny Tanàna Nerja Afaka mandeha tsara izy ao anatin'ny iray andro, ity tanàna ity dia mahasarika mpizahatany maro amin'ny filaminany ary amin'ny morontsiraka atsimo, ao amin'ny faritanin'i Malaga, izay ahitan'izy ireo toetrandro mahafinaritra. Manasa anao hijanona elaela kokoa ny morontsiraka, izany no antony i Nerja dia toerana ahafahantsika mandray zavatra mora sy mitsidika tsikelikely.
La Tanàna Nerja Izy io dia malaza amin'ny zavatra sasany, toy ny Caves na Balcón de Europa, izay horesahintsika, fa tsy maintsy ho hitanao ihany koa ireo morontsiraka mahafinaritra sy toerana hafa mety mahaliana amin'ny fitsidihanay. Na ireo toerana toa azo tsidihina ao anatin'ny ora vitsivitsy aza dia afaka gaga amin'ny zorony tsara tarehy, toy ny amin'i Nerja.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any Nerja
2 Aiza no hijanonana ao Nerja
3 Inona no hohanina ao Nerja
4 Zohy Nerja
5 Balkonin'i Eropa
6 Museum an'i Nerja
7 Nerja Beaches
8 Valan-javaboary manga fahavaratra
9 Ny fiangonan'i Salvadaoro
Ahoana ny fomba hahatongavana any Nerja
Ny fomba tsara indrindra hahatongavana any Nerja dia amin'ny alàlan'i Malaga na Granada, mandray sidina mivantana mankany amin'ny iray amin'ireo tanàna roa ireo, ny dia lavitra kokoa avy any Malaga. Raha vao ao an-tanàna dia azo atao ny mandeha bus avy any amin'ny orinasa Alsa hankanesana any amin'ny tanànan'i Nerja ao anatin'ny adiny roa. Ny fomba iray hafa mety tsara kokoa hivezivezena avy ao amin'ireo tanàna dia amin'ny fiara manofa, izay manome antsika fahalalahana ihany koa rehefa mifindra manodidina ny morontsiraka manodidina na mijanona amin'ny toerana mahaliana amin'ny lalana mankany Nerja. Amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy dia mora ny mahazo fampahalalana momba ny orinasa manofa fiara sy ny toe-pahasalamany.
Aiza no hijanonana ao Nerja
Nerja dia toerana fizahan-tany ary noho izany dia ho mora ny mahita azy trano fandraisam-bahiny mankany amin'ny safidy mora vidy toy ny fisaka amin'ny Airbnb na trano any ambanivohitra. Raha tsy mandeha amin'ny vanim-potoana lehibe isika dia mety hiharan-doza ary handray ny trano hipetrahana amin'ny antoandro, fa amin'ny fahavaratra dia mila misoroka sy manatanteraka ny enti-modiny foana isika, miaro ny trano alohan'ny hahatongavany mba tsy hahagaga antsika na tsy maintsy hihevitra isika fa avo dia avo. vidiny noho ny tsy fahampian'ny tolotra amin'ny trano itoerana.
Inona no hohanina ao Nerja
Any Nerja dia misy trano fisakafoanana maro manolotra ny nahandro eo an-toerana, toa an'i Avalon, El Refugio na La Posada Ibérica. Ny lovia toy ny ronono mena avy any Almadraba, cod fillet ary hazan-dranomasina dia tena mahazatra. Ary tsy tokony halahelo ny paompy ao amin'ny bara ianao na ny gilasy matsiro amin'ny toerana toy ny Albi Heladeria, izay hahafaly ny fianakaviana iray manontolo.
ny Zohy Nerja dia iray amin'ireo zava-mahasarika an'ity mponina ity, lava-bato ao amin'ny tanànan'i Maro ary hita tamin'ny taona 60. Ireo zohy ireo ankehitriny dia toerana iray mahaliana ara-kolontsaina ary fitsidihana tena ilaina tokoa satria nisy sary hosodoko hita tao amin'izy ireo izay mety ho fantatra voalohany amin'ny ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ao amin'ireo lava-bato dia azontsika atao koa ny mankasitraka ireo stalagtites sy stalagmites, raha manome torolàlana mahaliana momba azy ireo kosa ireo mpitari-dalana.
Raha adiny vitsivitsy monja no ahitantsika an'i Nerja, izay ho safidintsika dia ireo lava-bato sy ilay Balkonin'i Eropa, ny fomba fijery izay maka sary ny tsirairay. Ity dia fomba fijery tsara eraky ny Ranomasina Mediterane izay mitazona ny toerana nisy trano mimanda tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary avy eo ny Castle Latsak'i Nerja. Ity lavarangana ity dia manolotra ny fahitana ny ranomasina sy ny morontsiraka, ary eo amin'ny farany ambany dia misy trano fisakafoanana misy fahitana mahafinaritra.
Museum an'i Nerja
Any Nerja dia misy fitsidihana ara-kolontsaina hafa, toa ny Museum an'i Nerja, izay ahitanao ny tantaran'ny mponina amin'ny Paleolithic. Ankoatr'izay, raha hijery ireo lava-bato isika, dia tsy maintsy fantarintsika fa ny fidirana amin'ny tranombakoka dia azo ampifandraisina amin'ilay fitsidihana, amin'izay samy mora vidy kokoa ho antsika izy roa.
Nerja dia mitovy dika amin'ny Morontsiraka mahafinaritra ary be dia be ny toerana ahafahanao miala sasatra aorian'ny fizahan-tany. Burriana's na Calahonda y Maro's dia anisan'ny be mpahalala. Amin'ny fahavaratra dia feno olona izy ireo, fa i Nerja dia tanàna mpizahatany tokoa eo amorontsiraka, noho izany dia tsy maintsy raisina ny fanapahan-kevitra momba ny fotoana handehanana eny amoron-dranomasina hitady ny toerana tsara indrindra.
Valan-javaboary manga fahavaratra
Nerja dia nalaza be tamin'ny taona valopolo noho ny andiany 'Verano Azul' izay tadidin'ny maro amintsika ary fenoina isan-taona tamin'ny fahitalavitra. Ity tanàna ity dia mahatadidy ihany koa ny andian-tantara ary izany no antony ahafahanao mitsidika ny valan-javaboary natokana ho an'ity andiany ity izay ahitantsika ilay malaza Sambon'i Chanquete, tsangambato ho an'ny mpanaraka ny andiany fahitalavitra taloha.
Ny fiangonan'i Salvadaoro
Ity no fiangonana manan-danja indrindra ao an-tanàna, izay nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Toerana iray azo tsidihina avy ao anatiny izy io ary tsy misy afa-tsy ny trano fivavahana lehibe indrindra. Raha tiantsika io karazana fitsidihana io dia tsy maintsy miakanjo tsara isika vao miditra, tsy tokony hanadino azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no jerena ao Nerja, tanàna fizahan-tany any atsimo